Wasiir Bayle ” Soomaaliya Maalgashi ayay diyaar u tahay” – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Wasiir Bayle ” Soomaaliya Maalgashi ayay diyaar u tahay”
By Abdihakim Sharif Ali / June 15, 2019 June 15, 2019
Muqdisho (SONNS):-Wasiirka Maaliyadda Xukuumada federaalka Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle waxa uu Magaalada Malabo ee dalka Equatorial uga qeyb galay shirkii Bangiga hormarinta Afrika oo uu ku matalayay Soomaaliya kaa soo looga hadlay hormarinta Dhaqaalaha iyo maalgashiga Afrika.
Shirka kadib waxa uu la kulmay madaxweynaha Bangiga Hormarinta Afrika Akinwumi Adesina waxuuna warbixin ka siiyay marxalada dhaqaalaha Soomaaliya iyo horumarka ay sameynayo.
Wareysi uu Siiyay TV CNBC oo ka hadla arrimaha ganacsiga ayuu ku faahfaahiyay waxyaabaha Soomaaliya ku soo bandhigtay shirka si gaar ah fursadaha dhaqaalaha iyo maalgashiga ee horyaala.
“Marka koowaad waxaan u sheegnay inaan leenahay kheyraad badan waxan leenahay xeebta ugu dheer Afrika. Waxay ii sheegeen inaan haysano mid ka mid kaluunka ugu wanaagsan ee ku jira badaha, waxaan u sheegnay inaan aad qani ugu nahay saliida iyo gaaska. Soomaaliya waxay noqotay mid ka mid ah dalalka ugu badan ee shidaal ku jiro, waan ka shaqaynaynaa dabcan, marka koowaad waa inaan xaqiijinaa amaanka, mida sadaxaad waxa weeye Soomaaliya waa ay burburtay waxwalba waxay ka bilaabanayaan meel hoose oo ay tahay in dib loo dhiso marka waxa yaala fursado badan”
Wasiir Belye waxaa uu sheegay in Soomaaliya diyaar u tahay in la maalgashado albaabadeeduna ay furan yihiin.
“Diyaar beynu nahay, albaabadeenu waa ay u furan yihiin caalamka oo idil gaar ahaan ganacsatada raadinaya meel ay maalgashadaan, waa Soomaaliya halka ku haboon waayo meelaha aad magacwdeen waan haysanaa kheyraadkooda waxan ka shaqeynaynaa ammaanka iyo waxay sameynaynaa shuruucdii aan idinku soo dhaweyn laheen.”